Nka na ụzụ chọrọ maka machining akụkụ na mmiri - Dongguan Tuoyuan nkenke Machinery Co. LTD.
Usoro nke nhazi akụkụ bụ usoro nke ịgbanwe ọdịdị nke ngwa ọrụ iji mee ka ha mechaa ngwaahịa ma ọ bụ rụchaa. A na-akpọ usoro a usoro teknụzụ. Ọ bụ benchmark maka akụkụ nhazi na nkenke igwe akụkụ nhazi. Usoro dị mgbagwoju anya.
The machining usoro benchmarks nke nkenke n'ibu akụkụ nwere ike kere n'ime edemede dị ka dị iche iche Filiks: mgbatị, ibe ya bụrụ, zọ, ịgbado ọkụ, okpomọkụ ọgwụgwọ, machining, nzukọ, wdg Ọ na-ezo aka n'ozuzu okwu nke dum akụkụ si CNC machining na igwe nzukọ. usoro. Ndị ọzọ dịka nhicha, nyocha, ndozi akụrụngwa, akàrà mmanụ, wdg bụ naanị usoro inyeaka. Usoro ntụgharị na-agbanwe njirimara nke ihe eji arụ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa emechaala. The CNC machining usoro na ndị ụlọ ọrụ bụ isi usoro.
Ngwe nhazi nke akụkụ
1. toledị ndidi a na-enweghị atụ kwesịrị ịchọta ihe chọrọ GB1184-80.
2. Ikike a na-ekwe ka akụkụ nke akara a na-enweghị atụ bụ ± 0.5mm.
3. Ọ dịghị fillet okirikiri R5.
4. Ihe niile dị na ya bụ C2.
5. Akụkụ dị nkọ bụ obtuse.
6. Nko di nkpu dull, ewepu iwe na ebe oku.
Elu ọgwụgwọ nke akụkụ
1. E kwesịghị ịkọcha, abrasions na ntụpọ ndị ọzọ na-emebi elu nke akụkụ ahụ.
2. Anaghị ekwe ka elu eri ejiri rụọ ọrụ nwee ntụpọ dị ka akpụkpọ ojii, bumps, bọtịnụ aghara aghara na anụ ụlọ. Tupu ị na-ese n'elu akụkụ niile nke ígwè dị mkpa ka a see, a ga-ewepụ nchara, oke oxide, griiz, uzuzu, ala, nnu na unyi.
3. Tupu iwepu nchara, jiri ihe mgbaze, lye, emulsifier, uzuoku, wdg wepu griiz na unyi n’elu akuku nchara.
4. Oge nke etiti n'etiti elu ka a kpuchie ya site ọgbụgba ọkụ ọgbụgba ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka derusting na primer mkpuchi ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 6h.
5. A ga-ese ihe dị iche iche nke akụkụ riveting na kọntaktị na ibe ha na agba mgbochi nchara na ọkpụrụkpụ nke 30-40Î¼m tupu ijikọ. A ga-ejikwa agba, putty ma ọ bụ nrapado n'akụkụ ikpere ụkwụ. A ga-etegharịrị ihe ntanetị nke mebiri emebi site na nhazi ma ọ bụ ịgbado ọkụ.
Nhọrọ nke akụrụngwa kwesịrị ịbụ ihe ezi uche dị na ya. Ekwesiri ime ihe ike na ihe di elu nke igwe, n'ihi na ihe bu isi ya bu igbusi otutu ego, ma ihe ziri ezi adighi elu. Agbanyeghị, maka nhazi dị mma, akụrụngwa akụrụngwa dị oke mkpa maka nhazi. Nhọrọ ezi uche dị na akụrụngwa igwe nwere ike ọ bụghị naanị hụ na izi ezi nke nhazi, kamakwa ịgbatị ndụ ọrụ nke igwe ahụ.
Usoro usoro nhazi maka nhazi nhazi nke akụrụngwa gụnyere ntinye akara akara, nke a na-eji lathes ma ọ bụ ihe ndozi mgbe ị na-arụ ọrụ na lathe CNC. Ihe nlele, akara a na-ezokarị aka ma ọ bụ ụkpụrụ ọnọdụ dị mkpa ka edebe n'oge nyocha. Mgbakọ mgbakọ, usoro data a na-ezokarị aka na akara ọkwa nke akụkụ n'oge usoro mgbakọ.
Ime igwe akụkụ nhazi ga-ama ihe